प्रचण्डले यसरी घरघरमा पुगे सुने जनताको गुनासो (भिडियो) – Saurahaonline.com
प्रचण्डले यसरी घरघरमा पुगे सुने जनताको गुनासो (भिडियो)
चितवन, कात्तिक २४ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ नेपाली जनताको बिकास र समृद्धीको चाहना पूरा गर्नका चितवन ३ बाट आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन ।
शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. ९ मा घरदैलो कार्यक्रमपछिको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘चितवनको बिकासलाई देशकै नमुना बनाउन आफ्नो सक्रियता र सामथ्र्य लगाउने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डलाई वडा नं. ९ मा स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका थिए ।
प्रचण्डलाई ३ नं. क्षेत्रमा उम्मेदवारको रुपमा पाउनु खुशीको कुरा भएको स्थानीयको भनाइ छ । फुलमाला सहित प्रचण्डको स्वागतका लागि स्थानीय घरको मुलगेटमा बसेका थिए । वृद्धवृद्धाहरुले प्रचण्डसगं सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धी गर्न माग गरेक थिए ।
त्यसको जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन पश्चात वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसले वृद्धा भत्तालाई सबैभन्दा सुरुमा सम्बोधन गर्ने बताए । उक्त अवसरमा प्रचण्डले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलार्र्इ मतदान गरी अत्यधिक बहुमतले बिजयी गराउन आग्रह गरे । संभावना नै संभावनाको खानीको रूपमा रहेको चितवनलाई बिकासको माध्यमबाट समृद्ध बनाउने मिसनका साथ आफू अगाडि बढ्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
बाम एकताको बारेमा जानकारी गराउदै अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थीहरूको सुदृढ एकताले मात्र राष्ट्रको बिकास सम्भव रहेको बताए । आफ्नो एकमात्र उद्देश्य देशको बिकास र सुसासन भएको उनले दावी गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुर वडा नं. ९ का शरदपुर, हाकिमचोक, दराईचोकका स्थानीयको घरदैलोमा पुगेर स्थानीय समस्याको बारेमा जानकारी लिएका थिए । प्रचण्डले घरदैलोको क्रममा आफू लगायत गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गरी अत्यधिक मतले विजयी गराउन सबैलाई आग्रह गरे ।